Naing BSell | Item - Aloe vera 97% soothing gel (Korea)
Aloe vera 97% soothing gel (Korea)
MAC (15 ကွက်​)
#Novo Vivid Color 100% QA eyeshadow palette
V-7 Toning Light Cream
👑 Ak စီလွန်​ Cross ဂါဝန်​ အကား 👑
🌱 🍀 🌿 Natural Land 🌿 🍀 🌱
🌿 🍀 အသားအရေအတွက် ကောင်းကျိုးများစွာ ဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ် Aloe Vera 97% ပါဝင်တဲ့ Natural land ရှားစောင်း gel လေးပါ 🌱 🍀 🌿
Myanmar FDA ရရှိထားပြီး 300ml ပါတဲ့ Korea နိုင်ငံထုတ် အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းကောင်းလေးမို့ အာနိသင်ထိရောက်လှတာကို တွေ့ရမှာပါ
ညအိပ်ရာဝင် မှာ မျက်နှာသစ်ပြီး Aloe Vera gel လေးကို မျက်နှာပေါ်မှာ ခပ်ပါးပါးလေး လိမ်းပြီး ပေါင်းတင်ပေးမယ် ဆိုရင် အမည်းစက် နေလောင်ဒဏ်ရာ အညိုအမည်းများ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်ပြီး အသားအရေ ဖြူစင်ဝင်းပချောမွေ့ လာမှာပါ
မျက်နှာသာမကခန္ဓာကိုယ် မှာ ရှိတဲ့ နေလောင်ကွက်များ သက်သာပျောက်ကင်းဖို့ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းများ ပြန်လည်စိုပြေအေးမြကြည်လင်လာဖို့ အတွက်လည်း Aloe Vera gel လေးလိမ်းပေးလို့ရပါတယ်
မျက်လုံးများ မို့အစ်ခြင်း မျက်ကွင်းညိုခြင်း မျက်စိအားစိုက်ရတဲ့ အလုပ်များလုပ်ပြီးနောက် မျက်လုံး စပ်ခြင်း/ ညောင်းညာခြင်း တို့အတွက် ရှားစောင်းဂျယ်ကို မျက်လုံးတဝိုက်မှာ လိမ်းထားပေးရုံ နဲ့ မျက်စ်ိအေးပြီးအမြင်ကြည်လင်လာနိုင်ပါတယ်
လက်သည်းခြေသည်းများ ခြောက်သွေ့ ညစ်နွမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျှင်လည်း ဂျယ်လေးသုတ်လိမ်းပေးပြီး စိုပြေနူးညံ့လာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်
ဆံနွယ်များ အရောင်မွဲကာ ပျက်စီး ကြမ်းတမ်းဖွာထွက်နေလျှင်လည်း ရှားစောင်းဂျယ်လေး ကို hair coat လို သုံးပေးမယ်ဆိုရင် ဆံသားများ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်များပြန်လည်ရရှိကာ နူးညံ့ပျော့အိသွားမှာပါ
တမျိုးတည်း နဲ့ စွယ်စုံသုံးလို့ရတဲ့ quality မြင့် ပစ္စည်းကောင်းကောင်း Aloe Vera 97% soothing gel လေးကို ၁ဗူးဝယ်ရုံနဲ့ ၈မျိုးသုံးလို့ရပါတယ်
1. မိတ်ကပ် ၂ဆ gel ၁ဆ(၂း၁)လိမ်းခြယ်ပေးပါက မိတ်ကပ်သား ညီညာပြီး အသားအရေကို အေးမြစေပါသည်။
2. ညအိပ်ယာမ၀င်ခင် မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် gel ကလေးကို လိမ်းပေးပြီး ပေါင်းတင်နိုင်ပါတယ်။
3. နေလောင်ဒဏ်၊ အပူလောင်ခြင်းဒဏ်၊ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေအား အေးမြစိုပြေ လန်းဆန်းစေပါသည်။
4. အမျိုးသားများ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပြီးနောက် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အသားအရေအား ကြည်လင်အေးမြ စိုပြေစေပါသည်။
5. အိပ်စက်အနားယူမည့် အချိန်တွင် gel အား cotton pad ပေါ်သုတ်လိမ်းပြီး မျက်ခွံများပေါ်တွင် မိနစ်အနည်းငယ် အုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်လုံးအာရုံကြောများ အညောင်းအညာပြေလျော့စေပါသည်။ အိပ်ယာမှ နိုးထချိန်တွင် အုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်လုံးအောက် ဖောင်းခြင်းများကိုလည်း ပြေလျော့သက်သာစေပါသည်။
6. ဆံသားလေးများပေါ်သို့ လိမ်းပေးလိုက်ပါက စေးကပ်မှုမှရှိဘဲ ဆံသားလေးများကို နူးညံ့ပျော့အိ စေပြီး ဆံနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အမျိုးသားများလည်း Hair Gel အဖြစ် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
7. လက်သည်းခြေသည်းများပေါ်သို့ သုတ်လိမ်းပေးပါက လက်သည်းလေးများ ၀ါခြင်း၊ ကျိုးခြင်း တို့ကိုသက်သာစေပြီး လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များကို ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။ လက်သည်းနီ မဆိုးမီ gel ကိုသုတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
8. နေလောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အနီကွက်များပေါ်သို့ gelကို လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ချက်ချင်း သက်သာအေးမြစေပြီး မူလအသားအရေအတိုင်း ပြန်လည်ရရှိစေပါသည်။ နွေအခါတွင် အသက်အရွယ်မရွေး မိတ်များပျောက်ကင်းစေရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်